ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ အကျဉ်းစံသင်းချိုင်းဂူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ အကျဉ်းစံသင်းချိုင်းဂူ
Posted by မောင်ရိုး on May 2, 2013 in Creative Writing | 55 comments
အခွင့်မရှိ မ၀င်ရ / ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြု
ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီမြေ ဒီရေမှာ နေခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်း ၂၆၀ ကျော်ပြီပဲ ၊။ အခုတော့ လူတွေကျုပ်ကိုမေ့လောက်ပြီပေါ့ ။
ကျုပ်ချစ်တဲ့  အညာမြေကိုခွဲပြီး စစ်ရှုံးဘုရင်နဲ့အတူ ဟံသာဝတီကိုလိုက်ခဲ့ရတာ မနေ့က တနေ့ ကလိုဘဲ ။
ဟံသာဝတီဘုရင် ဥပရာဇာကိုကျုပ်တစ်ခုတော့ကျေးဇူးတင်တယ် ။ကျုပ်ကို ဟောဒီ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားရဲ့ 
အနီးမှာ နေခွင့်ပေးလို့ ။ ပြီးတော့ ကျုပ်ရဲ့  ဂုဏ်ကိုချီးမြှောက်ပြီး ဂူသင်းချိုင်းဗိမ္ဗာန် တစ်ခုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်
ဒါပေမဲ့ ….ကျုပ်အညာကိုလွမ်းတယ် ။ ကျုပ်ရေးဖူးတဲ့ ကဗျာတွေထဲက အညာပုံရိပ်တွေကို ကျုပ်သတိရတယ် ။
မျက်စိတစ်ဆုံး ထန်းတောကြီးတွေ ….၊ ဖုံတစ်လုံးလုံးနဲ့ နွေရာသီကိုချယ်သထားပုံတွေ …..၊ ပြီးတော့ …..
အညာသူ အညာသားများရဲ့  ဖေါ်ရွေတတ်ပုံတွေ …. မန်ကျီး ၊ ဇီးသီး ၊ ဇီးဖြူ ၊ ဖန်ခါး ၊ ထန်းလျက် ၊ ကရေကရာ
စတဲ့ အချို အချဉ် အဖန် အညာရသာစုံတွေကိုလည်း လွမ်းတယ် ။ ကျုပ်ရောက်နေတဲ့ နေရာကနေ မိုးရာသီဆို
အညာကို ပြန်ပြေးချင်တယ် ။ ကျုပ်အတွက် ဆောက်ပေးထားတဲ့ အုပ်ဂူက လုံခြုံ ပါတယ် … ဒါပေမဲ့ ….
အရှေ့ ဘက်က လျှပ်ပန်းလျှပ်နွယ်တွေနဲ့အပြိုင် မိုးချိ်န်းသံတွေဟာ ကျုပ်ကိုသွေးပျက်စေတယ် ။ စိုစွပ်ပြီး
စိမ့်အေးနေတဲ့ မြေပေါ်ခြေချလိုက်တာနဲ့ ဖြန်းကနဲ ကြက်သီးတွေထလာပါရော ။ အုပ်ဂူထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း
လှဲလျောင်းရင်း ကျုပ်နားတွေကိုပိတ်ထားမိတယ် ။ မျက်စိမှတ်လိုက်တိုင်း အညာပုံရိပ်တွေပေါ်လာတတ်လို့
မဲမှောင်နေတဲ့ ဂူထဲမှာပဲ မျက်စိဖွင့်ပြီးအတိတ်ကို စွန်ခွါနေမိပြန်တယ် ။ ကျုပ်မှတ်မိပါသေးတယ် ။ အင်းဝ
မပျက်ခင် ကျုပ်ဟာ အမြဲတန်း အညာတောရွာတွေကိုသွားလာတတ်သလို သူတို့အကြောင်းလည်း စာဖွဲ့ 
ခဲ့သေးတာကိုး ။ ကျုပ်တို့နန်းတွင်းမှာ အပြိုင်အဆိုင် ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေ ဖွဲ့နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကျုပ်က
တောဓလေ့ သဘာဝတွေရေးနေတာ ။ ကျုပ်ကလည်း သူတို့ကိုချစ်သလို သူတို့ကလည်း ကျုပ်ကိုချစ်ကြတယ် ။
ကျုပ်တို့ ထီးဘုရား ဟံသာဝတီကိုပါတော့ ကျုပ်လည်း လိုက်ခဲ့ရတာပေါ့  ။ စစ်ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ . ..။
မုန်းလို့လည်း မဟုတ်ဘူး ….. မချစ်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး ။ တိုက်ဖို့ အကြောင်းရှိလို့ တိုက်တယ် ။ နိုင်တဲ့သူက
သမိုင်းရေးတယ် ။ နိုင်သူသဘော … နိုင်သူ သမိုင်း … ။ ကျုပ်ကတော့ အရှင်နဲ့တပါတည်း လိုက်ခဲ့ရင်း
ကျုပ်ဘ၀လည်း ဒီမှာပဲ နိတ္ထိတံ ခဲ့တာပဲ ၊။ ဒီအချိန်မှာ ဖြစ်လာသမျှ ကျေနပ် နေတတ် ပါပြီ ။ အချိန်ကာလ
တွေပြောင်းပြီး ကျုပ်လည်း သမိုင်းထဲရောက်သွားပြီ ။ သဲသဲမဲမဲ ရွာတဲ့မိုးတွေကြားမှာ ကျုပ်ကဗျာတွေ
စပ်တတ်နေပြီ ။ လျှပ်စီးလက်တာကိုကြည့် ရင်း အိုင်ချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ့သလို မိုးချိန်းသံရဲ့ နောက်မှာ
စည်တော်သံ တဒ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့  ။
သံစဉ်တွေကတော့ မချိုနိုင်ပါဘူး ။ အကျဉ်းစံ အရှုံးသမားရဲ့  အထီးကျန် ဒဿနတွေ ၊ ရေညှိ အထပ်ထပ်နဲ့
ရှေးဟောင်းသင်းချိုင်းဂူထဲက သံဝေဂလင်္ကာတွေ …..။ အညာမြေချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့  အောက်ပြည်ရောက်
တမ်းချင်းတွေ ….. ။ ဒါတွေ …ဒါတွေ အားလုံး ကျုပ်ရင်ဖွင့်ချင်ပါတယ် ။ ခက်တာက ကျုပ်က အကျဉ်းစံလေ ။
ကျုပ်သေဆုံးပြီး ကျုပ်ရဲ ကဗျာတွေကိုထိမ်းသိမ်းထားကြသလို ကျုပ်ကိုလည်း ဒီသင်းချိုင်းဂူထဲမှာ ထာဝရ
ပိတ်လှောင်ခဲ့ကြတာပေါ့  ။ ကျုပ်တစ်ယောက်တည်းပါ ။ ….. သေပြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့  ၀ိညဉ်မဲ့ အထီးကျန်
ကျုပ်သေပြီး နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာကြာမှာ လူတွေ ကျုပ်ရဲ့ နေရာကို လာခဲ့ကြပါတယ် ။ ကျုပ် ရေးခဲ့တဲ့
ကဗျာတွေဖတ်ပြီး ကျုပ်အုပ်ဂူကိုလာကြည့် ကြတာ ။ ကျုပ်ပျော်လိုက်တာဗျာ .. …. သူတို့ကြောက်မှာစိုးလို့
ကျုပ် အသံမပေးပဲ တိတ်တိတ်လေး လက်ပြနေတာ ။ တစ်ချို့ သမိုင်းဆရာတွေ ပြောဆိုနေတာတွေ ကြားတော့
လွဲနေပြီ လို့ ကျုပ်ပြောချင်လိုက်တာ . ….။ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ ။ အားလုံးတော့ ဘယ်မှန်နိုင်ပါ့မလဲ ။
ရှိပါစေလေ …. လူတွေ မကြာမကြာ လာနေတာပဲ ကျုပ်အတွက်ပြည့် စုံနေပါပြီ ။ သူတို့လာရင် ကျုပ်ပျော်သလို
သူတို့ ပြန်ရင်လည်း ကျုပ် မျှော်နေတတ်ပြီဗျ ။
ဒါပေမဲ့ ……ကျုပ်ရဲ့  ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ ရက်လေးတွေက ကြာကြာမခံဘူး ။ လူသွားလူလာ များရင် ကျုပ်ဂူပျက်ဆီး
မှာစိုးလို့ ပိတ်လိုက်ကြတယ် ။ ဂူကို တံတိုင်းခတ်ပြီး သံတံခါးနဲ့ပေါ့ ဗျာ ။ ကျုပ်လည်းအပြင်ထွက်ခွင့်မရှိသလို
ဘယ်သူမှလည်း ကျုပ်ဆီ လာလို့မရတော့ဘူး ။ ခုမှ တကယ် အထီးကျန်တာပါ ။ လူတွေနဲ့ ရောနှောနေပြီးကာမှ
လူတွေနဲ့ မတွေ့ ရ မမြင်ရ စည်းခြားခဲ့ပြီဆိုတော့………. ကျုပ်လေ …….. ဘုန်းဘုန်းလဲတော့တာဘဲဗျာ …..။
အမှန်တကယ် ကျုပ်ဂူသင်းချိုင်းကိုထိမ်းသိမ်းလားဆိုရင် ….မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ ။ ရေညှိအထပ်ထပ် ….
အပဲ့ အရွဲ့ ….. မိုးမလုံ လေမလုံ ……ခြအုံဖြစ်တဲ့နေရာကဖြစ် …..ဒီအတိုင်းပစ်ထားကြတာဗျို့  …..။
ဂူအ၀င်လမ်းမှာလည်း ရွက်ကြွေတွေ လေမှာဝဲလို့  တစ်ခါတုန်းက အလွမ်းခြေရာတွေနဲ့လေ …….။
မေ့ လက်စနဲ့ မေ့ ပါစေဆိုပြီး ပစ်ထားကြတာ ဘယ်နှစ် နှစ်မှန်းမသိ ။ ကျုပ် သမိုင်းထဲမှာတောင် မရှိတော့ဘူး
အခုတော့ …… ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် မရှိတဲ့နေရာ …။ လူမသိ သူမသိ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားအနီး လွင်တီး
ခေါင်ပြင်တစ်နေရာမှာ …… တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်လိုခြံခတ်ပြီး ပိတ်လှောင်ထားခံရတဲ့ ဘ၀ ……………။
တစ်ခါတုန်းက စစ်ရှုံးဘုရင်ရဲ့ ကျွန်ဖြစ်ပေမယ့်  ပညာကို ပညာလိုသိပြီး ၊ ပညာရှင်ကို ပညာရှင်လို သဘော
ထားတဲ့ ရန်သူဘုရင်ရဲ့ ချီးမြှောက်တာခံခဲ့ ဘူးတယ် ။ သေပြီးတာတောင် မြေတစ်နေရာ အပိုင်ပေးလို့
ဂူဗိမ္ဗာန်ကြီး ဆောက်ပေးခဲ့တယ် ….. ကမ္ဘာစစ်ဗုံးဒဏ်လည်း ကျုပ်ခံနိုင်ခဲ့တယ် ။ အဲ ..အဲ …ခင်ဗျားတို့ နဲ့
တွေ့ မှဘဲ ကျုပ်ဂူလည်း နှစ်ပေါင်း ( ၂၆၀ ) ထက်ပိုပြီး အိုမင်းသွားရတော့တယ် ….။ ကျုပ်ရင် ထဲမှာ ကဗျာ
တွေရှိတယ် ။ အဖြူထည် မဟုတ်တော့ပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့လောက်တာ့ အရောင်ရင့် မယ်မထင်ဘူး …..။
တစ်ခုတော့ မှာပါရစေ …..။ တစ်နေ့ မှာ တစ်ယောက် ယောက်များ ကျုပ်ဆီကိုလာခွင့် ရရင် …. ကညစ်တံ
တစ်ချောင်းရယ် ပေတစ်ထုပ်ရယ် ကျုပ်အတွက် ယူလာပေးကြပါ ….။ ကျုပ် စာပြန်ရေးချင်လို့ …………………။
ဒီတိုင်းပစ်ထားရင် သတောင်းဇား ၀င်ခိုမယ် အိမ်ခြေယာခြေမဲ့ အခြေစိုက်မယ် ..အတွဲတွေ မှောင်ရိပ်ခိုမယ်…
ဟော…ပိတ်ထားပြန်တော့ … စိတ်ပါဝင်စားသူတွေ သာမန်ပြည်သူတွေ လေ့လာလိုသူတွေ အတွက် အကျိုးယုတ်တယ်..
ဒီ၂ခုစလုံးက အစွန်း၂ဖက်ပါပဲ ….။
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ထားပြီး စောင့်ရှောက်ဝင်ကြေးယူ အလည်အပတ် လာသူတွေလက်ခံ
အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်း ..တတ်နိုင်ရင် သူ့စာတွေ ထုတ်ရောင်း ဘာသာပြန်တွေ လုပ် …
အနည်းဆုံး အထုပတ္တိလောက် ရောင်းစားနိုင်ရဲ့..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုလိုလုပ်ထားတာကတော့ ချဉ်ဇယာပါဗျာ …
ကျုပ်အဲဒီကိုရောက်တော့ကိုရင်တို့ ဓတ်ပုံဆရာ အဖွဲ့ကိုသတိယလိုက်တာဗျာ
ကျုပ်မှာ ကင်မရာလဲမပါတော့ဖုနိးကင်မရာအစုတ်နဲ့ ရိုက်လိုက်ရတာ
မသိဘူးတဲ့  ကွာ ….
ပန်းသည်အဖွားကြီးတစ်ယောက်ညွှန်လို့ ရောက်ခဲ့တာဟေ့ 
တကယ်တော့ဦးကျောက်ပြောတဲ့စာအုပ်ဖတ်ဖူးကတည်းကအဲဒီနေရာကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ
ဖြစ်သင့်တာတော့ ပိတ်ထားမယ့်အစား၊ “ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု” လုပ်ပေးပြီး…
ပြတိုက်ဖွင့်လိုက်ရင် အနည်းဆုံး လူတချို့လည်းအလုပ်ရမယ်…
ဒေသခံတွေလည်း ပန်းရောင်းလို့လည်းရ၊ တခြားဝန်ဆောင်မှုကလည်း ဝင်ငွေရဦးမယ်…
အဲ.. ပန်းရောင်း ဆိုမှ…
ဝင်းဦးရဲ့ “မိန်းမလှ အမုန်း”ထဲက ပန်းသည်မလေး “ညို့” ကိုသတိရသွားပြီဗျ…
“အင်ကြင်းပန်း” ရယ် “၀န်ကြီးပဒေသရာဇာအုတ်ဂူ”ရယ်…
အဲဒီစာအုပ်ပြန်ထွက်လို့ ၈၀၀၀ ပေးပြီးဝယ်ထားသေးတယ် ။
မောင်ထွန်းနိုင် ၊ မမမေဂျာ (ခ) မမနှင်း နဲ့  ကျိုက်ခေါက်ဘုရားတန်ဆောင်းကပန်းသည်မလေး ညို ဟုတ်စ ….
ကျနော်သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ပါဗျို့  …
အဲဒီစာအုပ် အီးဘုတ်အနေနဲ့ ဖတ်ဖူးတယ်။
၀င်းဦးရဲ့ စာတွေ စန္ဒာမှာပဲ ဖတ်ဖူးတယ်။
အဲဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှ ၀င်းဦးရဲ့ စာရေးခြင်းအတတ်ပညာကို အံ့သြချီးကျူးမိတယ်။ :hee:
တဆက်တည်း ဂျလေဘီသယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ စာရေးဆရာကြီး ဆာမိကိုလည်း ၀င်းဦးလိုပဲ တော်ပါပေ့လို့…. :hee:
ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပြီး ဝင်းဦးကိုကြော်ငြာလိုက်ဦးမယ် ဟဲဟဲ
အဲဒီ မိန်းမလှအမုန်းကို စာအုပ်အဖြစ်ဖတ်ချင်ရင်ပြောဗျာ
တနည်းနည်းနဲ့  ပို့ ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော
သီချင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးတစ်ယောက်က ၀င်းဦးဆိုထားတဲ့ “ဒီပါအေးမြ “သီချင်းကြီးကိုနားထောင်ရင်း မိန်းမလှအမုန်း ၀တ္တုကို ဖတ်လိုက်ရင်
လူကို အိ ကျ သွားတယ်ဆိုတာဘဲ။
သီချင်းလဲ ရှိတယ် ၀တ္တုကဲ မပဒုမ္မာပို့ပေးထားလို့ရှိတယ်။
ဝင်းဦးရဲ့ “မိန်းမလှ အမုန်း” အီးဘုတ်လိုချင်ရင် ပြောပါခင်ဗျာ…
ဦးကျောက်ပို့ပေးပါ့မယ် 1.5 MB ရှိပါတယ်။
အပေါ်က မစ္စတာဂီပြောတဲ့ အကြံကိုထောက်ခံပါတယ်ဗျို့…
မန်းဂဇက်မှာ တင်ပေးပါဆိုလို့ 
ဂွင်းသိုင်းထူး ဆိုပါလား ???
မထိတ်သာမလန့် သာပဲဦးကြောင်ရယ် ဟဲဟဲ
ပုဆိုးဂွင်းသိုင်း တာ ဟုတ်စ
တစ်ခါပြုပြင်ပြီး ဂူသွင်းတုန်းက ဌာပနာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ပြတာ သတိရမိသေးတယ် … ကြာလာတော့ တော်တော်ကြာပြီ .. နှစ် ၂၀ လောက် ရှိပြီထင်တယ် … အခုတော့ မေ့မေ့လျော့လျော့ပဲ …
ကျနော်က အဲဒီနေရာကို ခုမှရောက်ဖူးတာ
ရေလည်ဘုရားကို ရောက်တတ်ပေမဲ့ တစ်ခါမှဝင်မကြည့် ဖြစ်ဘူး ။
ဒီတစ်ခါတော့ ရောက်အောင်သွားရှာမယ်ဆိုပြီး ရောက်သွားတာလေ
ထင်တာထက် ဂူဗိမ္ပန်က ကြီးနေလို့ အံ့သြရသေးတယ် ။
ခက်တာက တားမြစ်နယ်မြေဖြစ်နေတော့ အပေါက်ဝကဘဲလှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ် ။
ဌာပနာ ဆိုလို့.. ဘာတွေ မြင်ခဲ့လဲဟင်..
ဒေါ်ဆူးပြောမှ အဲဒီဌာပနာလေးတွေသိချင်တယ်ဗျို့ 
မှတ်မိသလောက်ကတော့ ဘုရားလေးတွေပါ … ပြခန်းလုပ်ပြီး ပြထားတာ .. အခု ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပေါ်မှာ ရှိသေးလားတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး … နောက်တစ်ခါ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားရောက်ရင် သေချာစုံစမ်းပေးပါ့မယ် ..
ရောက်ဖြစ်ခဲ့ ရင်တော့ဓတ်ပုံလေးပါ ရိုက်ခဲ့ ပါဦးနော
အလုပ်ရှုပ်ခိုင်းသလိုတော့ ဖြစ်သွားပြီ :hee:
သွေးပူ သွေးဆူ ကာလဆိုရင်တော့ အမြင်ကောင်းအောင် အားချင်းလုပ်တတ်တဲ့
သဘာဝကလွဲပြီး အခြားသေချာချာ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းဖို့ ပြင်ဖို့ဆိုတာဝေးကွာလှပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ တစ်ချို့သမိုင်းဝင်နေရာတွေဟာ တိမ်မြုတ်ပျောက်ကွယ်လုနီးနီး ရှိခဲ့ကြရရှာပါတယ်လေ။
“အဲ လမ်းများကြုံလို့ ထပ်ရောက်ခဲ့ရင် အဲဒီကိုလာဖြစ်တဲ့အခါ ကညစ်တံ တစ်ချောင်းရယ် ပေတစ်ထုပ်ရယ် ယူလာပေးမယ်လို့ ပြောထားပေးပါဟု…။´´
ဟုတ်ကဲ့  ဦးခ
အစ်ကိုပြောသလိုပါပဲ ….. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းက တော်တော်အားနည်းပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် ရှေး/သု ဌာနရဲ့ အားနည်းချက်တွေပေါ့။
သူများတွေက မရှိ ရှိတာလေးတွေရှာဖွေဖေါ်ထုတ်နေချိန်မှာ
ကျနော်တို့ က မီးစိုက် မြေမြှုတ် ထုံးသုပ် ပစ်လိုက်ကြတာကိုး …
အနိစ္စ c/d2သဂျီး
ရောက်များရောက်ခဲ့ရင် အများပြည်သူ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါစေလို့ဘဲဆုတောင်းရတော့မှာဘဲ..
ကျနော်လည်း အဲဒီကိုရောက်တော့ စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်တာနဲ့ 
ရေးလိုက်တာ ။ အများပြည်သူ နဲ့  နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွားများပါ စည်းကမ်းတကျ
လေ့ လာ ကြည့် ရှုနိင်ြတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်
တစ်နေ့ နေ့ ပေါ့ ဗျာ
ဦးဆာမိ သန်လျှင်ကို သွားခဲ့တယ် ဟုတ်…..
အရင်တုန်းက လွင်တီးခေါင်မှာ ဂူတလုံးထဲ ထီးထီးကြီး ဂူပေါ်မှာတောင် အလေ့ကျ အပင်လေးတွေ ပေါက်လို့ပေါ့ အဲဒီကနေ ရှင်းလင်းပြီး ဂှုနဲ့တစ်လှန် အကွာ လောက်မှာ ဒူးခေါင်းသာသာလောက်မြင့်တဲ့သစ်သား ခြံစည်းရိုးလေးခတ် နောက်တော့ ကြီးမြန်သစ်ပင်လေးတွေစိုက်ပြီး အုတ်နဲ့ ခြံစည်းရိုးခတ် အ၀င်အထွက် မလုပ်ရ ဖြစ်သွားတာပဲ… သန်လျှင် ကျောက်တန်း ဘုရားဖူး လာကြသူတွေဟာ ကျောက်တန်း ရေလည် ဘုရား ကို လူတိုင်းနီးပါး ရောက်ကြပေမဲ့ ကျိုက်ခေါက် စေတီ ကို လူတိုင်းမ၀င် ဖြစ်ကြပါဘူး..
အဲဒီတော့ ကျိုက်ခေါက်စေတီ နဲ့ဆက်စပ်ပြီး တော့ (အနည်းငယ်လဲ ကွာဝေးတဲ့) ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ ဂူ ရှိနေတယ် ဆိုတာကိုသတိမထားမိတော့ဘူးပေါ့……
အခု သွားခဲ့တဲ့ ဦးဆာမိတောင် ကျိုက်ခေါက်စေတီ မြောက်ဘက်ဇောင်းတန်း ဘေးမှာရှိတဲ့ နတ်သျှင်နောင် ဂူ ကို သတိထားမိဟန်မပေါ်ဘူး..(သိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်နော်)
ကွန်မန်းတွေဖတ်ပြီး တွေးမိတာလေးက တာဝန်ရှိသူတွေက ဘုရားဖူးတွေ လာချင်အောင် လေ့လာနိင်အောင် မစွမ်းဆောင်နိင်သေးဘူးလို့ပဲ ထင်ပါတယ် …..
ကျနော် နတ်ရှင်နောင်ဂူကို အဲဒီနားမှာရှိမှန်းမသိခဲ့ဘူးဗျာ။
သန်လျင်မှာရှိမှန်းသိပေမဲ့  သိပ်ဝေးမယ်ထင်တာရယ် ပြီးတော့ 
ကလေးတွေပါနေတော့သွားရလာရ မလွတ်လပ်တာရယ်ကြောင့် မရှာတောလ့တာ ။
ကျနော်ရောက်တဲ့အချိန်ကလည်း နေ့ လည် ၁ နာရီဝန်းကျင်ဆိုတော့အရမ်းပူတယ်လေ ။
ပြီးတော့စိတ်ပျက်သွားတာက စောင်းတန်းမှာ သုံးယောက်ကိုမေးတာ
နှစ်ယောက်က မသိဘူး လို့ ဖြေတော့အတော်လေး ညစ်သွားတယ်ဗျို့  …။
ကျနော်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပါဦးမယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုရင်လည်း ပို့ စ်တစ်ပုဒ်လောက်ရေးတင်ပေးပါလား
ကိုရင်ရေးရင် ပိုပြီးပြည့်စုံမှာဗျ ။
ကိုရင်ရေးရင် ပိုပြီးပြည့်စုံမှာဗျ ။…ဟုတ်
အမလေး.. ဦးဆာမိရယ် ကွန်မန်းတောင် သူများသဘောပေါက်အောင် မရေးတက်လို့ တောင်းပန်ရတာ အခါခါ….:)
ကျောင်းသားဘ၀ က ကျိုက်ခေါက်စေတီ ကုန်းတော်ပေါ်မှာ သစ်ပင်ချုံနွယ်တွေ ရှင်းလင်းရင်နဲ့ ခုချိန်ထိ စဉ်းစားမိနေတာ….
(မှန်တာပြော တာဝန်ရှိသူများ အမြန်အကောင်ထည်ဖေါ်နိင်ပါစေ) ရွှေတိဂုံကုန်းတော် ကခင် ဈေးဆိုင်တန်းရှိတဲ့နေရာမျိုး လို ကွန်ကရစ်ပတ်လမ်း လုပ်စေချင်မိနေတာ….ရွာထဲမှာ သမိုင်းအကြောင်းတွေ သိပြီး စာရေးကောင်တဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ဦးဆာမိရယ်…
၀န်ကြီးပဒေသရာဇာဂူ အကြောင်းကို ရေတဲ့ပုံစံလေး သဘောကြမိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပါစေ…..
I think, the writer who made this letter was writing in side the heart of Wungyi Padaytha Yarzar!!!!!
Thanksalot Ko Surmi.
ခေါင်းလည်း ဘုထနေပြီ ဟဲဟဲ
ထုတ်တန်းကိုဆောင့် မိလွန်းလို့ 
အခွင့်မရှိ မ၀င်ရ / ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြု တဲ့
ပြောရင်းဆိုရင်း ကိုစံလှကြီးရောက်လာပြီဖြစ်လို့သူ့ ပဲ အပူကပ်လိုက်ပါဦးမယ်
ကိုဆာမိပြောမှသိတော့တယ်။ လုံးဝကိုမသိတာ။ သူ့သမိုင်းကြောင်းလဲသိပ်မသိဘူး။ ဖတ်ရရင်ကောင်း မယ် နော်။ သူ့နာမည်ကိုသာရင်းနှီးတာ။ သူ့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကိုလုံးဝနီးပါးမသိတာ။ သိရင် ပိုစ့်တင်ပါလား ကိုဆာမိရေ။ ရောက်ရင်လဲသွားကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်။
ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာကမှ အုတ်ဂူလေးတလုံး ကျန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ တခြား ဘာအမှတ်အသားမှ မကျန်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးတွေလဲ အများကြီးပဲကိုး။
ပြုပြင်စောင့်ရှောက်မှုလေး လုပ်ရင်တော့ ကောင်းပါရဲ့။
မတွေ့ ရတာလည်းကြာပေါ့ ဗျာ ။ အင်းးး ရွာကလည်းဝင်ရခက်သကိုး
ကိုစံလှကြီးကိုသတိယကြောင်းလည်း ဟိုတလောက ဦးကျောက်တို့ နဲ့ပြောဖြစ်ပါသေးတယ် ။
သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံလေးတွေပေါ့။ခုပဲ တောင်းဆိုနေကြတာမြင်မှာပါ ကျနော်ကတော့ ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်လေတော့ ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်တွေ့ ရတာ ဝမ်းသာတယ်ဗျို့  …….
စာအမှတ် ။ ။ ၀၃၃၀/၀၃၀၅/၂၀၁၃
အကြောင်းအရာ။ ။ ဒီလောက်ကျန်နေတာကံကောင်း။
အထက်ပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ၀န်ကြီး၏ တင်ပြလာမှုအား လက်ခံစဉ်းစား သုံးသပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း။ သို့ရာတွင် လတ်တလော ကိစ္စရပ်များအား အထူးဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေရ၍ အစောတလျင် မလုပ်ပေးနိူင်သေးကြောင်း။ ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး ကုန်ကျစားရိတ် အပါအ၀င် ထိန်းသိမ်းရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီ တို့ကိုပါ ကြိုတင်ဖွဲ့စည်း ပေးထားမည် ဖြစ်သော်လဲ လတ်တလော အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် မူအားဖြင့် သဘောတူ လက်ခံထားပြီး အဆင်ပြေသလို အ၀င်အထွက်အပေါ် မူတည်၍ ကြည့်လုပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အကကသည်။
သမိုင်းကြောင်း ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မရှင်
မှတ်ချက်။ ။ အခုလက်ရှိ ၀န်ဂျီးတွေဆီ ဖြစ်ချင်တာလေး စာရေးတင်ကြည့်၊ ဒီလို စာချောချောနဲ့ အကြောင်းပြန်ဖို့ နေနေသာသာ အဖက်တောင်လုပ်ပီး ပြန်ရေးလိမ့်မယ် မဟုတ် ….. ဒါဗြဲ
ကိုရင့်ကော့်မန့် ကိုမနက်စောစောကတည်းကဖတ်ပြီး ရီနေရတာဗျာ ။
ပုဂံလိုနေရာတောင် ပျက်အစဉ်ပြင်မရ နဲ့ 
ပြင်ဆိုတော့ လည်း ထုံးပဲသုတ်တာဆိုတော့ …..
မထူးပါဘူးလေ ဝန်ကြီးစာရေးချင်တယ်ဆိုရင် ဂဇက်ရွာသာ ပို့ လိုက်တော့ မယ်
သြော်………..တို့ရဲ့ သနားစရာ ဝန်ကြီးတစ်ပါးပါလား.
သူ့ခမျာ တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်လို့ နေရှာတယ်
တာဝန် ရှိသူတွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမသိပေမင့်
တာဝန် သိသိနဲ့ ဝန်ကြီးဆီက စာကိုတောင် ယူလာပေးနိုင်တဲ့ ဦးဆာကိုတော့ ဗရာဗိုပါ လို့
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ် ….သင်္ကြန်အကြိုနေ့ က အဲဒီဘက်သွားရင်း
ဟိုတွေးဒီတွေး ရေးစရာမရှိ ကလိလိုက်တာပါ
တကယ်တော့ လည်း ဂူ တစ်ခုဆိုတော့့
ဂူတစ်ခုပဲပေါ့……
ကျနော့ ကိုတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ မ နေတာကလား ဟရို့ 
သတောင်းစားအင်တာဗျုး လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုက်
အခုလည်း သရဲ အကြောင်းရေးခိုင်းလိုက်
သတောင်းစားအကြောင်းက တကယ်လုပ်ရင်အလွယ်လေးဗျ နော
ကျနော့ အနီးမှာ သုံးဖွဲ့ ရှိတယ်
ကျနော်ရေးတင်လို့ ဝိုင်းဆဲရင်တော့သဂျီးရှင်းပေးရမှာ
နတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီး.. ဟိုလူဒီလူတွေကို အိပ်မက်ပေးတယ်လုပ်တဲ့စာရေးပါလားဟင်…
ဘုန်းကြီးတပါးပါး. မြှောက်ပေးပြီး.. လုပ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့..
အောင်မြင်တဲ့.. စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ရင်.. အဲဒီအုပ်ဂူရှေ့မှာ..နတ်တင်ရမယ်.. ပူဇော်ပသရမယ်လုပ်ပေါ့…
ကျုပ်တောင်.. အဲဒီပုံလေးသေသေချာချာကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်.. ဂူပေါက်ဝက..အငွေ့ထွက်လာသလိုလိုလေးမြင်ရပြီး.. အခုဆို. ရေးရတာတယ်လက်သွက်..
ခဏခဏ ဆာ၏ (ဗိုက်)
အဲဒီကိုသွားရင် တစ်ယောက်တည်းမသွားနဲ့ 
မောင်ရင်ကကြောက်တတ်တော့အဖေါ်ရအောင် ကောင်မလေးခေါ်သွား
ရေးထားတာ ရေလည် ရေလည် လန်းသဗျာ …
ဟိုလူဂျီး နေရာက ရေးပြသွားဒါ မိုက်ဒယ် .. ချယ်ဘဲ …
အိုက်လူဂျီးဆီ လာခွင့်ရတဲ့အခါ …
သူမှာဒဲ့ .. “ကညစ်တံ တစ်ချောင်းရယ် ပေတစ်ထုပ်ရယ်” ယူလာဂဲ့မယ်လို့ ပေါပေးဘာရို့ …
ကျုပ်လည်း အိုက်ဒီနေရာရောက်ရင် သွားဦးမယ်ဗျာ …
ကျနော်ကိုလဲ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လှမ်းခေါ်နေတယ်။
အရင်က ဆွေတော်မျုိးတော်သချိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ ရွှေပြည်ဝန်ကြီး ရဲ့ အုတ်ဂူကျန်နေသေးတယ်တဲ့။
အစ်ကိုရေ …. ရိုက်ပြီးရင်လည်း နောက်ခံအကြောင်းလေးရေးပြီး တင်ပါဦးနော ….
ကျနော်ကတော့ ဖုန်းကင်မရာနဲ့ပဲဖြစ်သလိုရိုက်လိုက်ရတာမို့မပီမပြင်ဖြစ်နေတယ်
ကိုပေါက်ရိုက်ပြီးရင် ပြန်တင်ပေးပါဦး …
ဂျာနယ်ထဲရောက်ဖို့ ထိတော့မမှီသေးပါဘူးဗျာ
ဟိုးအရင်ကတော့ကျောင်းသားတွေလေ့ လာခွင့်ရတယ်ဆိုလားပဲ
အခုတော့ပိတ်ထားတာကြာပါပြီ
တကယ်တော့အထက်မှာကိုတညင်သားပြောသလို ပါပဲ …
ရေလယ်ဘုရားရောက်ကြပေမယ့်ကျိုက်ခေါက်ကို မဝင်ဖြစ်ကြဘူး
ကျနော်လည်း ဒီတစ်ခေါက်မှ ရောက်ဖြစ်တာပါ
ရောက်တုန်း ဝင်းဦးဝတ္ထုကိုသတိယလို့ ရှာပြီး သွားကြည့် တာ
ကိုဆာမိရေ…ဒီပို့စ် ကို သက်ဆိုင်သူတွေ
ကိုဆာမိ ရဲ့ပို့စ်ကြောင့် တကယ့်တန်ဘိုးရှိတဲ့
Green Rose ဦးဆာမိ ရဲ့ ပို့စ်လေးကို အမှတ်တရ စာအုပ်ထဲမှာ ထည့်ဖို့ ကူးယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဆာမိ ခွင့်ပြုမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်. စာပဲကူးလို့ရပြီး ပုံက ကူးလို့မရသေးလို့ အဲဒါ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် Green Rose ရဲ့ e-mail address livethelifealive@gmail.com ကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်
ကိုရင့်စာ ကိုရင့်ရေးဟန် ကြိုက်မိတာကြာပြီမို့ ဖြစ်သင့်တာကြာနေပြီ ခုမှဖြစ်လည်း ဂုဏ်ယူတယ်လို့ ဆိုပါရစေဗျာ၊ ကျောက်စ် အလွန်ကြိုက်တဲ့ပို့စ် ဆုရတာမို့ လွှတ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာ…. ၊ များများရေးပါ ကိုရင်ဆာရဲ့…
ခေတ်ပြောင်းသွားပြီ။ Apple သင်ပုန်းယူလာခဲ့မယ်။
.။ တစ်နေ့ မှာ တစ်ယောက် ယောက်များ ကျုပ်ဆီကိုလာခွင့် ရရင် …. ကညစ်တံ
Green Rose ၊ ကိုကျောက် ၊ ဦးနေးချား နဲ့ အန်ကယ်ကြီးခင်ဗျာ
အထူးပဲ ဝမ်းမြောက်မိသလို အထူးလည်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ
ရွာထဲ အဝင်ခက်လို့ မရောက်ဖြစ်သလို မမျှော်လင့်ပဲ ရခဲ့တာကြောင့်လည်း
ဖတ်ရှုအားပေး ခဲ့သူများကို သတိတယ ကျေးဇူးတင်နေမိပါကြောင်း……
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးကတည်းက အတွေးရော အရေးကိုပါ အလွန်သဘောကျခဲ့တယ်။
ဗုတ်တော့လည်း ဒီပိုစ့်ကိုပဲ ဗုတ်ခဲ့တယ်။
မှန်ကန်စွာ ထိုက်တန်စွာ ဆုရရှိသွားလို့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျုပ်မလည်းးး ကွန်နက်ရှင်ကနှိပ်စက်တော့ ရွာထဲကို ပို့စ်တင်တဲ့ အချိန်လေးပဲ ရောက်ဖြစ်တော့ စာတွေ မဖတ်ရတာကြာပေါ့……အခုလိုင်းလေးက ကောင်းနေလို့ ကွန်မန့်လေး ရေးလိုက်ပါတယ်…..ဗရာဗိုပါ..ကိုဆာမိ။
အန်​တီမမ ၊ ကိုထွန်းဝင်းလတ်​၊ ဦးမိုက်​ နဲ့ ကို​အောင်​ပု ​ရေ ….
ရွာထဲဝင်​ဖို့ခက်​​နေလို့ အမြဲမ​ရောက်​ဖြစ်​တာပါ ။
ခုလို အား​ပေးစကားကြားရတာနဲ့ပဲ ဝမ်း​မြောက်​ လှပါပြီ။
ဒီပို့စ်​ကိုဖွဘုတ်​မှာ ရွာထဲက​ရော ရွာပြင်​ကသူတချို့ပါ ရှယ်​တာ​တွေ့ဖူးပါတယ်​ ။
သတိယရင်​​ပြောဦး​လေ ​နော …
ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုက်မှာ ကဆာမိပုံနဲ့ တင်ထားတာ တွေ့ဖူးတယ်… ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း…
တိန်​ တိန်​ တိန်